ပျော်ရွှင်မှု၏ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်များ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတာဝန်ခံဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများ (ပိုက်ဆံ၊ အလုပ်၊ မိသားစု၊ ဘုရားသခင်စသည်) များစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒီမနက်မှာသတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ သူကမက်ဒေါနားနဲ့ Oprah မှာအာဖရိကမှကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားတာကိုရှင်းပြတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုအထင်ရှားဆုံးကလူအများအပြားရဲ့ပြောဆိုချက်ကဒီဟာကမက်ဒေါနားအတွက်ကလေးကိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရပ်ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။
ငါသည်ဤအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုငါ့ site ပေါ်တွင်အရင်က whined ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီရိုးရှင်းစွာရယ်စရာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဘောင်သည်အသိဥာဏ်၊ စွမ်းရည်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အဘယ်ကြောင့်အမြဲရှုပ်ထွေးစေသနည်း။ ဒီတော့မက်ဒေါနားကသူဌေးဖြစ်လို့ပိုကောင်းတဲ့မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာလား။ ထိုကောင်လေး၏မိဘမဲ့ဂေဟာတွင်သူ့ကိုချစ်မြတ်နိုး။ ဂရုစိုက်သောစိတ်ကူးယဉ်သူများရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ယုံမှားစရာမရှိ၊ သို့သော်သူသည်မက်ဒေါနားလက်အောက်တွင်အိမ်စောင့်တစ်ယောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဒီတော့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ပိုက်ဆံကဒီကလေးကိုပျော်ရွှင်စေမလား? သေချာလား? ကျောက်တုံးကြယ်များသို့မဟုတ်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူများ၏ဘဝအချို့ကိုသင်မြင်ဖူးပါသလား။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးထဲကို ၀ င်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဘ ၀ တစ်ခုလုံးရုန်းကန်နေကြတယ်။ ကြွယ်ဝမှုသည်ပြintoနာသစ်တစ်ခုလုံးကိုဘဝထဲသို့ယူဆောင်လာသည် (ကျွန်ုပ်လိုချင်သောပြproblemsနာများ) မင်းမက်ဒေါနားကိုမေမေလိုချင်လား ငါမလို! သူမမှာငွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာဂရုမစိုက်ပါဘူး။ Madonna ကိုသူမတကယ်လေးစားဖို့ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါကမက်ဒွန်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကံဆိုးတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကခန့်မှန်းတာပဲ။ ငါသည်သူ၏ယဉ်ကျေးမှုမှဖယ်ရှားပစ်သောကလေးတစ် ဦး, မိမိဇာတိမြေ, သူ့မိသားစုတစ် ဦး မေမေအဖြစ်ဂျက်လေယာဉ် -setting ရော့ခ်စတားနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုအခွင့်အလမ်းရပ်တည်ချက်ကိုမယုံနိုင်ပါ။
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ?
သူ့အဖေကသူ့ကိုဂရုမစိုက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကောင်လေးကမိဘမဲ့ဂေဟာမှာရှိနေတယ်။ အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယူဆချက်မလုပ်နိုင်ပါ။ အမေရိကန်လူမျိုးများစွာသည်အချို့သောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ကလေးများအားမည်သို့ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ခံရသည်နှင့်တုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်။ ထိုလူသည်သူ့သားကိုအလွန်ချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုကျွေးမွေးနိုင်မည့်သူအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပမာဏလိုအပ်သည်
အကယ်၍ မက်ဒေါနားသည်ကလေးငယ်တစ် ဦး အတွက် ၀ ယ်မည့်အစား၊ သူသွားရောက်ခဲ့သောဒေသအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပညာရေး၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချို့ကိုပြုလုပ်လိုက်လျှင်ကော။ သူမသည်များစွာသောလူများ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ သူမွေးစားခဲ့သောကလေးသည်ထိုနည်းတူစွာပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ငါ StumbleUpon ကိုချစ်တယ်
27:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 29
30:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 15
ထွက်ခွာသည် http://gather.com/ - NPR ၏လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ယနေ့တွင်စစ်တမ်းကောက်ယူနေသည် -“ မက်ဒေါနားကိုသူမအားမွေးစားခြင်းအားဖြင့်မီဒီယာများမှမတရားပြုမူဆက်ဆံသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။